प्राइम बैङ्क | Ratopati
कारबाहीमा पर्ने म्यानपावरको सङ्ख्या बढेमा प्राइम बैङ्कले हात उठाउनुपर्ने बेला आउन सक्छ access_timeचैत ५, २०७६
कुमारप्रसाद दाहाल वैदेशिक रोजगार विभागमा महानिर्देशकका रूपमा सरुवा भई आएको करिब १ महिना भयो । यो एक महिनाको अवधिमा उनले दर्जनभन्दा बढी स्टिङ अपरेसन गरे भने २ वटा म्यानपावर कम्पनीको धरौटी जफत गरिएको छ । अर्को एउटा म्यानपावरको धरौटी जफतको प्रक्रियामै रहेको छ । ...
११ अर्बको प्राइम बैङ्क तर बिना धितो १२ अर्बको बैङ्क ग्यारेन्टी ! access_timeचैत ३, २०७६
कुनै त्यस्तो बैङ्क होला जसले बिना धितो पनि ऋण दियोस् ? असम्भव । किनभने कुनै त्यस्तो बैङ्क हुँदैन जसले बिना धितो ऋण दियोस् वा बैङ्क आफै ग्यारेन्टी बसिदियोस् । तर नेपालमै एउटा त्यस्तो बैङ्क छ जसले बिना धितो १२ अर्बभन्दा बढी रकमको ग्यारेन्टी बसेको छ, त्यो पनि नेपाल सरकारला...
एक भए प्राइम र कैलाश बैंक, १९ अर्बको पुँजीकोष access_timeफागुन २९, २०७६
काठमाडौं । प्राइम बैंक र कैलाश विकास बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु भएको छ । बिहीबार प्राइम कमर्शियल बैंकको मुख्य कार्यालयमा आयोजित समारोहमा प्राइम बैंक र कैलाश विकास बैंकको एकीकृत कारोबारको घोषणा भएको हो । दुई बैंकबीच गत असोज १५ गते मर्जका लागि प्रारम्भिक सम्झौता भ...
प्राइम बैङ्कको नाफा १ सय ३० करोड पुग्यो, सबै सूचनकहरुमा उल्लेख्य सुधार access_timeमाघ १९, २०७६
काठमाडौँ । प्राइम कमर्सियल बैङ्कको नाफा १ सय ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को पहिलो ६ महिनामा १ अर्ब ३० करोड ७ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको हो । प्राइमको यो नाफा अघिल्लो वर्षको सोही समयमा कमाएको नाफाभन्दा २२.६२ प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो वर्ष सो बै...